बैंकमै यसरी साटिन्थ्यो नक्कली हजारका नोट « Anumodan National Daily
बैंकमै यसरी साटिन्थ्यो नक्कली हजारका नोट
प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०७४, शनिबार १२:२१
नक्कली नोटको बिगबिगी बढेका घटना सार्वजनीक भइरहेका बेला बुटवलमा त्यस्ता नोट छाप्ने मसिन सहित एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा रुपन्देहीको कन्चन गाउ“पालिका ६ घर भै बुटवल ११ बुद्धनगरमा बस्ने २१ वर्षे सन्तोष मल्ल हुन् । इप्रका बुटवलले उनलाई बिहीबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनीक गर्यो । सन्तोषबाट एक हजार रकम बराबरका १ लाख नक्कली नोट र एक हजार बराबरका १ लाख सक्कली नोट बरामद गरेको छ । साथै असहायकालागि खोलिएको बताउने सन्तोषको कार्यालय अर्फन हेल्पीड. हेन्डबाट १ हजार दरका २ सय ५९ वटा, १०० का ५ वटा नोटसहित पैसा छाप्ने फ्रि इन्क प्रिन्ट मसिन र समेत बरामद गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी मुकुन्द मरासिनीले बताए ।
२२ जेठको दिउसो २ बजे सन्तोष बुटवलको मिलनचोकमा रहेको प्रभु बैंकको शाखामा आफ्नो खातामा रहेको एक लाख रुपैया निकालेका थिए । बैंकबाट एक हजार रकम बराबरका नोट पाएका उनले उत्तीबेलै कर्मचारीलाई नक्कली नोट दिएर ५ सय बराबरका नोट मागेका थिए ।
बैंकले प्रहरीलाई खबर गरेपछि अनुसन्धान अघि बढेको हो । यसअघि उनले पहिलो पटक एक लाखमा यौटा र यसपछि १४ वटासम्म नक्कली नोट राखेर रकम खाटेको खुलेको छ । प्रहरीले अभियुक्तलाई मुलुकी ऐन २०२० को खोटाचलन मुद्धामा म्याद थप गरी अनुसन्धानमा राखेको छ । यस महल अन्तरगत बिगो अनुसार जरिवाना तथा १० वर्षको कैद जरीवाना हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
बैंकमै साटिन्थ्यो नक्कली रुपैंया
२२ जेठको दिउसो २ बजे सन्तोष बुटवल मिलनचोकमा रहेको प्रभु बैंकको शाखामा पुगे । आफ्नो खातामा रहेको एक लाख रुपैया निकाल्न चेक दिए ।
बैंक कर्मचारीले सबै प्रकृया पुर्याएर उक्त रकम बराबरका हजार हजारका नोट दिए । सन्तोषले बुझे । सकेण्डभरमै आफूस“ग भएका नक्कली नोटका बिटा निकाले । यसपछि पा“च पा“च सयका नोट चाहिएको भन्दै बैंक कर्मचारीलाई दिए । आफैले दिएका नोट सम्झी बैंकका कर्मचारीले तत्कालै पा“च पा“चका नोट साटिदिए । आफूले छापेका नक्कली नोट सजिलै बैंकमा बुझाएर उनी फटाफट बाटो लागे । ‘यो सबै कुरा बैंकका सिसिटिभीबाट थाहा भयो र अभियुक्त समातन सकीयो।’ डिएसपी मरासिनीले भने ।
कसरी छाप्थे ?
नोट छाप्नका लागि सन्तोषले फ्रि ईन्क कलर प्रिन्टर मेसिन र ल्यापटप किनेका थिए । हजार र पा“च सयका नोटका एक एक भाग रंगीन फोटोकपी गर्थे । दुई भागलाई जोडेर सक्कली जस्तै देखीने बनाउथे । प्रहरीका अनुसार अगाडि पछाडि सक्कली नोट राखेर बिटा तयार गर्र्थे ।र, चलाखी पूर्र्वक बैंकमा पुगेर साट्थे । नक्कली नोट तयार गर्नका लागि उनले २५ हजारमा रंगीन प्रिन्टर किनेका थिए ।
को हुन सन्तोष ?
असहायका लागि सहयोगी हातहरु नामक एक सामाजिक संस्था चलाएका सन्तोष बुटवलमा चल्तापूर्जा युवा हुन् । उनले बुटवलका उद्योगी ब्यापारी, पत्रकार, सामाजिक क्षेत्रका बिभिन्न ३१ जनाका सफलताका कथा समेटिएको बुटवलका ३१ रत्न नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । श्रोतका अनुसार पुस्तकमा समेटिएका कतिपय ब्यक्तिबाट उनले मोटो रकम असुलेका थिए ।
कोरोना कोषबाट अनियन्त्रित खर्च
केका लागि आयो ? कहाँ भयो खर्च ? कोरोना कहर बढ्यो, कोष रित्तो धनगढी ।
सुख्खा बन्दरगाहको गुरुयोजना पुरा
धनगढी । कञ्चनपुरको दोधारा चा“दनीमा बन्ने सुख्खा बन्दरगाह तथा एकिकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना (मास्टर प्लान)
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : आर्थिक कार्यविधि संशोधन विधेयक पारित
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश
मेसी फरगुशन ट्याक्टरको शोरुम खुल्यो
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक टा“फे ग्रुपको मेसि फरगुसन कम्पनीको ट्याक्टरको सोरुमको सञ्चालनमा आएको